सोफिया : एक राष्ट्रवादी र नारीवादी व्यक्तित्व – newslinesnepal
सोफिया : एक राष्ट्रवादी र नारीवादी व्यक्तित्व
प्रकाशित मिति : १६ श्रावण २०७७, शुक्रबार १५:११
सोफिया थापा एक असल र अनुशासित नारी हुन् । उनमा राष्ट्रवादी चिन्तन छ । यो कुराको पुष्ठि त उनी जन्मजातै हिन्दु भए तापनि बुद्धको जन्म देश नेपालको बारेमा प्रचार प्रसारमा संलग्न “लुम्बिनी कपिलवस्तु विश्वअभियान”मा पनि सक्रिय रुपमा सरिक भई काम गरेकोले गर्दछ । यसको अलावा उनी एक नारीवादी महिला हुन्, जस्ले महिला र पुरुषलाई बराबरी ठान्दछिन् र व्यवहारमा पनि समानताको अभ्यास गर्दछिन् । उनले धर्म, जात, लिङ्ग, सम्पत्ति, राजनीतिको आधारमा मानिसहरुलाई विभेद पनि गर्दिनन् । गर्दछिन् त केबल समस्या कहाँ छ त्यसलाई उजागर गर्ने जमर्को गर्दछिन् । त्यसैले, उनले गर्ने कार्यहरु पनि यसैप्रति झुकाव राख्दछ ।
सोफिया थापाको हालैको पप गीत“अबको तीज नो ब्रत प्लिज ….” ले निकैनै चर्चा कमाएको छ । उनको यो गीतले महिला तथा पुरुषहरुको समस्यालाई सहजता ल्याउनको लागि केही आवाज उठाउने प्रयाश गरेको छ । उनले यस गीतमा महिला र पुरुष बराबरी भएकोले महिलाले श्रीमान्को खुट्टाको पानी खाएर श्रीमान्लाई पतिपरमेश्वरको रुपमा मानेर ब्रत नगरौँ भनेकी छिन् । वास्तविकरुपमा भन्नुपर्दा यसरी व्रत बसेर श्रीमानको स्वास्थ्यमा सुधार आउने कुरामा भने यो पंक्तिकार पनि विश्वास गर्दैन । बरु श्रीमान्को स्वास्थ्य तथा दीर्घायु त यदि घरमा श्रीमान् श्रीमती बीचको सम्बन्धसुमधुरहुनुको साथैस्वस्थकर खानपीनले नै हुने हुनाले उनले उठाएकी यी कुरामा मेरो पनि पूर्ण सहमत छ । तर खाली पेटमा ब्रत बस्दा भने स्वयम् ब्रतालुको स्वास्थ्यमा भने राम्रै हुने कुरा विभिन्न डाक्टरहरु तथा योगा गुरुहरुको भनाईमा विश्वास गर्न सकिन्छ ।
वास्तवमामेरोबिवाह १७।१८ वर्षको उमेरमानैबुबा आमाले मागी बिवाह गरिदिनुभएको हो । त्यतिखेर, अल्लारे बुद्धि भएकोले यस्ता कुरितिका कुराहरु हटाउन पर्ने सोच आए तापनि व्यवहारमा प्रयोग गर्न विविध कारणले समस्या थियो । जब, विस्तारै केही वर्षहरु बिते त्यसपछि यी कुराहरुलाई मनन् गर्दै श्रीमतीको शीर आफ्नो पैतलामा राख्नु भनेको अशोभनीय र न्यायसँगत नभएकोले यस्ता कार्यलाई लकडाउन (बन्दाबन्दी) नै गरिदिएँ । त्यतिखेर, मेरी श्रीमतीले गोडाको पानी खाने चलन तत्यहि बिहेको दिनमा मात्र भएको थियो होला सायद । खै त मेरो बैवाहिक लगन गाँठो कसिएको पनि ४२ वर्ष बितिसक्यो तर मैले त कहिल्यै पनि केही गुमाएजस्तो लागेको छैन । बरु यसले परिवारबीचको सम्बन्धमा झन् सुमधुररुपले मजबुद र सुन्दर बन्दै गएको महशुस गरेको छु ।
अर्को कुरा, उनले तीज दिनप्रतिदिन भड्किलो बन्दै गएकोले रंगीबिरंगी चुरा, साडी र महंगा गहनाले झकिझकाउ सिँगारिई गुडियाजस्तै बनेर दर नखाआँै भनेकी छिन् । उनले सफा र साधारण पहिरनमा पनि दर खाँदै तीज मनाउन सकिन्छ भन्ने सन्देश दिएकी छिन् । कतिपय महिलाहरुले त अरुको नक्कल गरेर भारी खर्चमा यस्ता भड्किला सामग्रीहरु खरीद गर्न श्रीमान्लाई दबाब दिँदाश्रीमान्ले ऋण खोजेर ल्याएर भने पनि चित्त बुझाउनु पर्ने अवस्था छ । यसले त्यस्ता श्रीमान्हरुमाआर्थिक समस्याले चिन्ताबढ्दै स्वास्थ्य अवस्थामा गम्भीर समस्या निम्तिएको हुन्छ ।त्यसरी श्रीमान्को स्वास्थ्यमा असर पारेर ब्रतमा मात्रै श्रीमान्को सुस्वास्थ्य र दीर्घायुको कामनाले खासै सार्थकता मिल्छजस्तो लाग्दैन ।त्यसैले, गीतकारले घुमाउरो पारामा पुरुषहरुकै भलाइको लागि अबको तीज नो नक्कल प्लिज, नो खर्चको भारी, महिला पुरुष दुबै नै बराबरी भनेर बोलेकी छिन् भने पुरुषहरु रिसाउनुको सट्ठा उनलाई त सम्मान गर्नसक्नुपर्ने थियो जस्तो लाग्छ मलाई त । त्यस्तै गरेर, यसमा उनले नारी हितमा कुरा गरेकी हुनाले नारीहरुले पनि रोदन र क्रन्दन गर्नुपर्ने देख्दिन । यसमा त बरु समस्त नारीहरुले उनीप्रति ऐक्यबद्धता प्रकट गर्दै महिला विभेदप्रति थप आवाज उठाउँदा राम्रो देखिन्छ । यो मेरो निजी विचार मात्र हो ।यहाँहरुले यसमा विमति राख्न भए तापनि मेरो भन्नु केही छैन ।
यसको अलावा, सोफियाले महिला दिदी बहिनीहरुलाई एकआपसमाहातमा हात समातेरएकैसाथसबैसँग खुसी बाँड्दै छमछमी नाच्दै यस पालिको तीज मनाउँ भनेकी छिन् । त्यसैले, गायिकाले तीज नमनाउँ भनेर कहाँ भनेकी छिन् र खै ? कसैलाई उनले गीतमार्फत गरेको अनुरोध मान्दिनभन्दा पनि उनको यो गीतमा बोलिएको कुरा सबैले मान्नै पर्छ भनेर पनि त भनिएको छैनन् नि । उनको कुरा अपनाउने नअपनाउने त व्यक्ति विशेषमानै भर पर्दछ नि । हैन र ? बजारमा टिकाटिप्पणी आएको सुनेपछि मैले पनि यो गीतलाई तीनपटक दोहो¥याएर सुने । त्यसमा न त पुरुषलाई न त हिन्दुधर्मप्रति कुनै कटाक्षनै गरेकिछिन् न त तीज पवै खलल गर्ने काम नै । त्यसैले, यस कुरालाई हिन्दु धर्मसँग जोडेर कसैले पनि राजनीति नगर्दानै राम्रो । सोफियाको लेखप्रति कसरी हेर्ने भन्ने कुरा हामीले कुनै बस्तुप्रति हेर्ने दृष्टिकोणमा भएको फरकको कारण मात्र हो जस्तो लाग्छ । उदाहरणको लागि एउटा गिलासमा आधा पानी राखेर केही व्यक्तिलाई यो गिलासमा पानी आधा भरी छ की आधा खाली छ भनेर सोध्यौँभने कसैले आधा खाली छ भन्छन् भने कसैले आधा भरी छ भन्छन् । यदि व्यक्तिको धारणा सकारात्मक छ भने उसले आधा भरी छ भन्छन् भने नकारात्मक सोँच भएका व्यक्तिहरुले आधा खाली छ भन्छन् । यसमा उसको चेतनाको स्तरले पनि काम गरेको हुन्छ । त्यसैले, कसैप्रति विमति हुन्न भनेर म भन्न पनि सकिन्न । तर त्यसविषयवस्तुमा कसरी प्रस्तुति हुने भन्ने सबाल महत्वपूर्ण हुन्छजस्तो लाग्छ ।
म र मेरो परिवार पनि जन्मजातै हिन्दु हाँै । तर हामीलाई सोफिया थापाको गीतप्रति कुनै गुनासो छैन ।सो कुरा मेरी श्रीमती र बुहारीले फोनबाटै सोफियालाई उनको कृतिप्रति बधाई दिँदै ऐक्यबद्धता पनि जनाइसकेका छन् । मैले जब उनको गीत सुने तब लाग्यो कि उनले महिलाभित्र गुम्सिएका पीडाका कथा र व्यथाका पोकाहरु खोल्ने प्रयास गरेकी छिन् । उनको यो गीतले केही हदसम्म भने पनि महिलाको भावना बोकेकोले सामाजिक रुपान्तरणको जगमा एक ईट्टा थप्ने कार्य अवश्य गरेकी छिन् भने पुरुषहरुलाई पनि केही हदसम्म भने पनि राहत । त्यसैले, उनलाई नकारात्मक रुपले हेर्नुभन्दा पनि सकारात्मक रुपले टिकाटिप्पणी गरेर उनलाई सामाजिक रुपान्तरणमा सरिक गराउन हौसला प्रदान गर्दै थप कृतिको लागि पनि शुभकामना दिन सकेमा उनीप्रति न्याय हुने ठान्दछु । एकै रथका दुई पांग्रा हामी सहजरुपमा सँगसँगै गुड्न सकियो भने अवश्य पनि गन्तव्यमा पुगिन्छ । यसैमा हामी सबैको भलाईदेखिन्छ ।